लकडाउन १० दिन थपियो, अबको लकडाउन झन कडा हुने ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारलकडाउन १० दिन थपियो, अबको लकडाउन झन कडा हुने !
लकडाउन १० दिन थपियो, अबको लकडाउन झन कडा हुने !
२४ बैशाख २०७७, बुधबार ०९:२५ प्रकाशित
काठमाडौं : सरकारले लकडाउन १० दिन थप्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिम अझै कायमै रहेको भन्दै जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन १० दिन लम्ब्याएको हो।
सरकारले लकडाउनमा अझ कडाइ गर्ने निर्णय समेत गरेको बताइएको छ । को;रोना सङ्क्र’मण रोक्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो । लकडाउन कै अवधिमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भने बढिरहेको छ। लकडाउन सुरू हुँदा नेपालमा २ जनामात्र को;रोना संक्रमित थिए भने अहिले ८२ जना पुगेका छन्।
को;रोना भा’इरस संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले चैत १८–२५, चैत २५–वैशाख ३, वैशाख ३–१५ र वैशाख १५–२५ गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान मे १५ अर्थात् जेठ २ गतेसम्म बन्द गर्ने यस अगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै हिजो बसेको को;रोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सरकारले गर्दै आएको लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।